Ewepụghị LCD Display Series Factory - China ịgbatị LCD Display Series Manufacturers na Suppliers
LYNDIAN 58 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 58 inch setịrị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị Bardị Ngosipụta, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, Nhazi ahaziri, Ogwe ndị na-agbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na ụzọ ịchọta ụdị, na-enye usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji dọrọ uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
Ntinye: Ugwu Ugwu, Ugwu Mgbidi Na Guzo On Isiokwu Dị
Ntinye: USB, SD Kaadị oghere
Ngwa: Ime ụlọ
Ihe Klas: Housinglọ algwè
Ndabere ọkụ: ELED
LYNDIAN 49.5 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 49.5 inch agbatị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Bardị Ngosipụta ,dị a, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, ahaziri ahaziri, Ultra ịgbatị ogwe maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na ụgbọala mwekota egwuregwu na ụzọ ịchọta ụdị, na-enye usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji dọrọ uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 43.8 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 43.8 inch agbatị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Bardị Ngosipụta ,dị a, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, ahaziri ahaziri, Ogwe ndị na-agbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na ụzọ ịchọta ụdị, na-enye usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji dọrọ uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 43 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 43 inch Extretched LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị Mgbapụta Ngosiputa, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị mmadụ na-enweta ohere, Nhazi ahaziri, Ogwe aka gbatịpụrụ agbatị maka ụgbọ njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na ụzọ ịchọta ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji dọrọ uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 40.6 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 40.6 inch agbatị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị Mgbapụta Ngosiputa, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe a na-enweta ọhaneze, Nhazi ahaziri, Ultra ịgbatị ogwe maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na ụgbọala mwekota egwuregwu na ụzọ ịchọta ụdị, na-enye usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji dọrọ uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 38.5 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 38.5 inch agbatị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， ，dị Ngosipụta ,dị a, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, Nhazi ahaziri, Ogwe ndị na-agbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na ụzọ ịchọta ụdị, na-enye usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji dọrọ uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 37.7 inch nke gbatịrị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Bardị Ngosipụta ,dị a, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, ahaziri ahaziri, Ogwe ndị na-agbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na wayfinding ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji jide uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 37.1 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 37.1 inch Extretched LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị playdị Ngosipụta, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, Nhazi ahaziri, Ultra ịgbatị ogwe maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na ụgbọala mwekota egwuregwu na wayfinding ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji jide uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 36 inch Extretched LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị Mgbapụta Ngosiputa, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, Nhazi ahaziri, Ogwe ndị na-agbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na wayfinding ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji jide uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 28.6 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 28.6 inch agbatị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị Bardị Ngosipụta, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị mmadụ na-enweta ohere, Nhazi ahaziri, Ultra ịgbatị ogwe maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na ụgbọala mwekota egwuregwu na wayfinding ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji jide uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 28 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 28 inch setịrị LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Nke a Typedị Disdị Ngosipụta, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị ọha na eze na-enweta, Nhazi ahaziri, Ogwe mgbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala mwekota egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na wayfinding ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji jide uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
LYNDIAN 24.5 inch gbatịrị LCD Display
LYNDIAN 24.5 inch Extretched LCD Display Series Railway Commercial LCD Extra Wide Display ， Bardị Ngosipụta Bardị a, na-agbanwe ihe ngosi lcd, ngosipụta dị mma maka ebe ndị mmadụ na-enweta ohere, ahaziri ahaziri, Ogwe ndị na-agbatị Ultra maka njem, Akpaaka na ụgbọala na-egwu egwuregwu na egwuregwu mwekota egwuregwu na ụzọ na-achọ. ụdị, na-enye ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iji jide uche ọha na eze. Ihe omuma ya na ihuenyo di omimi, gbatiri, mmekorita onyonyo iji mee ka ndi nlekota abuo buru otu n'ihi na i nwere ike drivegbọala ma hazie mgbasa ozi na onye njem.
Smart Interactive Ewepụghị Panel Mere Display, Mmekọrịta Ewepụghị Panel Display Education, Niile Na Otu Mmekọrịta Ewepụghị Panel, Aka mmekọrịta Flat Panel Display, 75 Interactive Ewepụghị Panel Display, Mkparịta ụka Whiteboard na-eweta mmekọrịta,